कोरोना महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रका यी क्षेत्रमा पार्दैछ घातक असर « Himal Post | Online News Revolution
कोरोना महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रका यी क्षेत्रमा पार्दैछ घातक असर
प्रकाशित मिति : २०७७, ६ बैशाख ०८:५९
बीबीसी- ताजा सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा जीडीपी साढे ३४ खर्ब रुपैयाँ छ। वर्षभरिको देशका यावत् आर्थिक गतिविधि, उत्पादन र कमाइ जोड्दा हुन आउने रकम नै जीडीपी हो।
अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्, “कतिपय देशले हाम्रा कारखाना बन्द भएपछि कामदार राख्न सक्दैनौँ भन्न थालेका छन्।”
खनाल भन्छन्, “सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटका बेला पनि हामीलाई डर लागेको थियो। तर धेरै असर परेन। यसको एउटा कारण भनेको अधिकांश नेपालीहरू अत्यावश्यक मानिने क्षेत्रमा कार्यरत छन्। जस्तै – सुरक्षागार्ड, खेतीपाती, सरसफाइ, किनमेलका पसल अनि आपूर्ति प्रवाह।”
“तर कैयौँ नेपाली होटल तथा रेस्टुराँमा पनि छन् जुन समस्यामा पर्न सक्छन्। यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस स्वदेशनै फर्किए भनेपनि तिनमा दक्षता हुन्छ र तिनले अर्थतन्त्रलाई फाइदा दिन सक्छन्,” खनालले थपे।
अर्थविद् डा. प्याकुर्‍यालको अनुमानमा यस्ता साना / मझौला व्यवसायीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशतको योगदानका साथै १७ लाखलाई रोजगारी दिएका छन्।
“तिनलाई उद्धार गर्ने प्याकेज नबनाए भयानक अवस्था आइपर्छ,” उनले भने।
यस विषयमा अर्थविद् आचार्यको धारणा पनि उस्तै छ।
अधिकांश व्यापार तथा व्यवसाय अहिले ठप्प छन्।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको अंश २.८ प्रतिशत अनि आयातको अंश ४० प्रतिशत छ।
एकातिर यो अवस्थामा माग नै हुने देखिँदैन भने अर्कोतिर माग भएपनि त्यसको आपूर्ति गर्न सहज छैन। अत्यावश्यक भनिएका सामग्रीको आयात तथा ढुवानीमा त समस्या देखिएको छ भने अरूको कुरै छाडौँ।
समग्रतामा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका अवस्था पनि नाजुक बन्दैछन्।
सहज आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले कारोबारमा असर त छँदैछ अन्य क्षेत्रमा परेका सबै किसिमका नकारात्मक असरले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा जोखिममा पर्न सक्छन्।
“पर्यटनमा मात्रै ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाका अर्बौँ लगानी छ। त्यसको अब रिकभरी वा सुधार हुन समय लाग्छ। त्यसैकारण ब्याङ्कका सम्पति जोखिममा पर्छन् जसको चौतर्फी असर पर्छ,” खनालले बताए।
कृषिमा कस्तो असर पर्ला?
महामारी र ‘लकडाउन’को असर कृषिमा नपर्ने कुरै छैन।
तर यो क्षेत्रमा भने प्रभाव अलि कम पर्ला कि भन्ने आशा कतिपय अर्थविद्को छ। नेपालमा कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एकचौथाइ अंश ओगट्छ।
सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने स्थिति अनि श्रमिकको अभावले कृषि उत्पादनमा प्रभाव परिरहेको छ।
“त्यो सँगसँगै बजार पहुँच तथा आपूर्ति प्रणाली अस्तव्यस्त छ। कृषि उत्पादनलाई बजार लैजान सकिएको छैन,” डा. प्याकुर्‍यालले बताए।
पूर्वसचिव खनालको विचारमा कृषिमा सामान्य प्रभाव पर्नेछ। मुख्य खाद्यान्नबालीमा कमै प्रभाव पर्ने तर कुखुराको मासु अनि तरकारी जस्ता क्षेत्रमा बढी प्रभाव पर्न सक्ने उनले बताए।
“अहिले कतिपय उत्पादन भित्र्याउने अनि मकै छर्ने र लहरे तरकारी रोप्ने बेला हो। तर श्रमिक पाइएको छैन,” अर्थविद् आचार्यले बताए।
यो समयमा आत्मनिर्भर भनिएका कतिपय क्षेत्र पनि परनिर्भर रहेको उजागर भएको उनले बताए।
“भन्न त कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भनिन्थ्यो तर दानाको लागि सबै अन्तै भर पर्नुपर्ने रहेछ।”
यी तमाम चुनौतीका माझ अहिले सरकार विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव आकलन गर्न तथा नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा लागिपरेको छ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार ग्रामीण कृषिबाहेक अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा कोरोनाभाइरस महामारी तथा ‘लकडाउन’को असर परिसकेको छ। कृषिमै पनि नाशवान् वस्तुका भण्डारण अनि सामान आपूर्ति प्रभावित छ।
तर पनि यो वर्ष देशको आर्थिक वृद्धि दर चार प्रतिशतसम्म हुन सक्ने उनले आशा गरेका छन्।
“छरछिमेकमै गम्भीर असर परिरहेकोले हामीले उच्च वृद्धि त गर्न नसकौँला तर सङ्क्रमण धेरै नलम्बिए चार प्रतिशतसम्म पुग्छ,” उनले भने।
पर्यटन र विप्रेषणमा पर्ने गम्भीर असरबारे पनि अर्थमन्त्रीको अलि भिन्न बुझाइ छ।
उनी भन्छन् जति आम्दानी नेपालमा पर्यटक नआएर हुनेछ त्यति नै नेपालीहरू पनि विदेश भ्रमणमा नगएपछि जोगिनेछ।
त्यस्तै जति आम्दानी विप्रेषणमा घट्छ त्यसको भरथेग त्यसकै फलस्वरूप हुने आयातको गिरावटले गर्नेछ।
“उच्च तहको सन्तुलनबाट झरेर तल्लो तहको सन्तुलन कायम हुन सक्छ,” उनले भने।
अतिविपन्न राष्ट्रहरूको श्रेणीबाट केही वर्षमै माथि उक्लिने नेपालको लक्ष्यमा पनि वर्तमान सङ्कटको कालो छाया परेको छ।
तर अर्थमन्त्री खतिवडा यसमा पनि धेरै चिन्ता लिन नहुने बताउँछन्।
“हो हामी उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा थियौँ। अचानक झट्का लागेको छ। तर हाम्रा लक्ष्यबाट हामी पछि हट्दैनौँ। हामी फेरि उठ्छौँ।”